Ny zavatra mba Tsarovy, Rehefa Mihaona amin'ny Lehilahy Tsara Rehefa misy Poizina Fifandraisana
Ny zavatra mba Tsarovy, Rehefa Mihaona amin’ny Lehilahy Tsara Rehefa misy Poizina Fifandraisana
Manana manjavozavo ny fanentanana fa tsy faly foana eo amin’ny fifandraisana, fa ianareo dia tsy manamarina ny sendikà mba ho poizina. Ireo izay tsara vintana ampy mba hahita tantaram-pitiavana vaovao mahaliana rehefa misy poizina fifandraisana, izany dia hafa tanteraka niainany. Ireto misy zavatra vitsivitsy izay hitranga ho an’ny zazavavy izay mahafeno tsara ny olona rehefa nandeha ny alalan ny fifandraisana ratsy. Fa ny olona iray dia ianao ka natoky an-jambany nilalao miaraka aminareo ny fomba araka ny nieritreretana dia tsy takatry ny saina. Rehefa avy mahazo avy fa maizina ny lava-bato, ianao mbola isan-karazany nandrakotra ny masony, satria ny fahazavana vaovao fotsiny kely loatra mamirapiratra. Na dia eo aza ny fomba ny zavatra tapitra, ianao no niaina ny tena fitiavana, izay be dia be kokoa noho ny ankamaroan’ny olona afaka miteny ho an’ny tenany. Noho izany, aza t mahazo loatra hung up on zavatra raha toa ianao tsy afaka ny hahita olona nandritra ny fotoana kelikely avy eo. Ny s tsy fahita firy mba hahita ny tena zavatra ao ny ranomasina feno somethings. Indrindra fa rehefa afaka ianao, vao avy ny zavatra toy izany mafy. Rehefa ianao ao amin’ny fifandraisana, dia aza t hahazo ny ahy ny fotoana tokony hieritreritra momba ny zavatra nandritra ny fotoana kelikely. Ny s tsy toy ny ianao dia tsy maintsy mandeha feno amin’ny ho any an-ala, ary ho lasa mpitoka-monina irery, na inona na inona toy izany. Mandeha fotsiny ny azy ao an-doha. Raha mbola ny taloha mety ho ilay olona iray izay rava ny fifandraisany farany, ianao angamba mihoatra noho ny fantatry ny fahadisoana. Angamba ianao tsy mba miresaka ny zavatra ilaina dia ampy. Angamba ianao tsy t heverinao fa ilaina. Manaraka ho mihoatra noho ny feo ny momba azy ireo. Satria ny teo aloha ny fifandraisana efa rava ianao (fanamafisana ny saika), mety te-hanao anao nandritra ny fotoana kelikely. Ary indray mandeha no hitranga, fotsiny haka ny omby ny tandroka. Namely izay ananana bartender ianao ll angamba flake avy eo, oroka fa kisendrasendra lehilahy izay mety ho questionably tanora kokoa noho ianao. Ianao don t trosa amin’izy ireo na inona na inona. Afa-tsy ny tenanao rehetra mahafinaritra dia hita avy amin’ny teo aloha. Ary ny tsara indrindra. Tsy misy olona afaka hitsara anareo fa satria fantatr’izy ireo fotsiny nandeha ny alalan ny helo sy miverina. Amin’ny fifandraisana misy poizina, indrindra ny mifehy ireo, mety efa zatra namanao obsessing ny anao amin’ny fotoana toa very saina. (Mety hoe satria izy ireo.) Tena ara-dalàna ny olona, na izany aza.
Ento mora, ka ny don t mieritreritra fa ny zava-baovao mety ho olon-tiany dia t liana. Hankafizana ny fahafahana mahazo ianao. Manaiky ny ompa sy ny fahazoana tsinontsinoavina.
Ireo andro ireo
Raha ny marina, ny fahenina dikany ho famantarana kely ny fifandraisana misy poizina tokony hipoaka ny fahatezeranao raha toa ka izany mandrakariva no mitranga indray. Ny zavatra tsara indrindra tokony hatao mba handao ny olona teo aloha ny lalao noho ny taty aoriana. Fa fomba ll tsy fahazoana intsony mifatotra. Antoka, dia mety handratra ny iray na roa andro, fa ny herinandro na izany taty aoriana dia ll hiverina amin’ny tongotrao.
Phew, tsara riddance
Ny zava-drehetra izahay nandre ny heviny, tsy zava-misy. Ny zavatra hitanay dia ny fomba fijery, fa tsy ny fahamarinana. Ao amin’ny fikarohana ny marina. Maro ny olona manakorontana ny hambom-pon’ny tia tena tia, satria ny miraiki-po ny olona iray dia afaka ny ho mora azon’ny olona ho tia bebe Kokoa ianao amin’ny alalan’ny fisaraham-panambadiana ary manontany tena raha mbola tsy nahatsapa ketraka, ka tototry ny zava-drehetra izay mitranga. Mihoatra ny Fitiavana no mahatonga izao tontolo izao ny hetsika. Ny fitiavana no tena nitady-rehefa avy fiainan’ny olombelona. Fa ny zavatra mifanohitra amin’izay, fa raha isika aza dia ny fitiavana, dia mandeha mitady izany ivelan ny tenantsika. Fifaliana bebe kokoa ny zavatra izay hita ao ny tenanao. Anaty fandriampahalemana sy ny filaminana no tena manan-danja raha te-hiaina sambatra ny fiainana ara-pahasalamana. Tsy ho sarotra loatra amin’ny tenanao, dia nahita fomba mba hampitony ny sainao sy hanamaivana ny tebiteby ary ny fahaketrahana. Nanomboka nanomboka ny yoga sy ny fisaintsainana ny fiainana iray manontolo no niova ho tsara kokoa. Tsapako mazava kokoa momba izay azoko teo amin’ny fiainako ary inona ny tanjona dia
← Fiarahana tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny aterineto Mampiaraka Toerana miaraka amin'ny finday isa
Jona Free Kisendrasendra Webcam Amin'ny Chat Omegle Ankizivavy Chatroulette Chat →